Kana Amai Vako VaNarcissist - Vanarcissist
Ndakadzidza iyo chaiyo izwi rekuti 'Narcissist' mimwe mwedzi yapfuura. Yakanga yakaita semakore aive mumaziso angu akangonyangarika, uye mhinduro dzemibvunzo yandaisazombogona kuumba dzakabuda pamberi pangu.
Mumashoko akareruka kwazvo, tinogona kunyora mamwe maitiro eanamai vokunyepedzera (NM), akadai se: kusava netsitsi kune vana vake, kugara achishungurudzwa mupfungwa, kumanikidzwa, uye kupenyerwa gasi (izvo zvatichataura nezvazvo pazasi). Kune iyo NM, mhosva inogara iri chombo vazhinji vanoshandisa zvakare zora mishandirapamwe , uye mamwe acho control freaks .
Ichi chikamu chidiki chenhoroondo yangu:
Pandaive mudiki, amai vangu vaiti vanofanira kunge vari pamubhedha uye 'iwe unofanirwa kunge uchiita basa rekuchenesa nekubika!' Ainyatso kureva kuti airatidzika kunge akaneta, kuguta, uye kushungurudzika… asi ndaingova nemakore manomwe chete.
Pandakanga ndiri muchikoro chepakati, kutenderedza makore gumi nemaviri / gumi nematatu, mazwi akafanana: mhuka, mbeveve, inoreva, inoseka, uye yaaida: kushungurudza, yaive chikamu chehupenyu hwangu hwezuva nezuva. Ndakanga ndavadzidza nemusoro, saka hazvishamise kuti ndakatanga kuita kushushikana kwakanyanya uye kushushikana.
Ndinorangarira ndiine makore gumi nemanomwe ekuberekwa, ndiri kusekondari, uye ndichida kufa (ini ndaidzorwa zvekuti ndaitotadza kubuda, uye ndinorondedzera zviitiko muhupenyu hwangu negiredhi randaive kuchikoro). Ndakafunga zvekutora mapiritsi, uye chinhu chega chakandimisa ipfungwa iyi: 'Ko dai ndakapona?' Haangambondiregerera, uye kuzondiudza kuti ndinomushungurudza sei nekumukuvadza nenzira iyi! Izvo zvakandipa goosebumps.
Saka, pachinzvimbo, ndakaedza napose pandinogona kuti ndichinje kuti ndive mwanasikana ari nani. Ini chaizvo ndakakurira murununuro modhi.
Asi zvisinei nezvandakaita, ini ndaigara ndine hutsinye. Zvisinei nekukanganisa kwaive pachena, aigona kuti ndakaiverenga zvakazara kuti aite shungu. Kunyangwe ndaedza zvakadii, kana ndikakundikana, izvo zvaitarisirwa, ndaive mbeveve. Ini ndakasarudzwa kaviri kuti ndive mambokadzi wepachikoro chesekondari, kwaakati: 'Vakakusarudza nekuti ibasa rakawandisa, vakasarudza vasina basa.'
zvekuita kana iwe uchida mumwe munhu zvakanyanya
Kuvhenekera gasi chinhu chakajairika pakati peva narcissist. Uku ndiko kukanda dombo nekuvanza ruoko, uyezve kutaura kuti dombo harina kumbovapo. Aindidaidza zvinhu zvakaipisisa zvatingafungidzira, uye pandakazvishingisa kuti ndimuudze, aiti aisaziva zvandiri kutaura nezvazvo.
Nguva zhinji iye aindipomera kuti ndiri kushungurudza kufunga zvinhu zvakadaro pamusoro pake, 'munhu akakwana' (mazwi ake asina kutaurwa).
Saizvozvo, kana akaverenga izvi, angadai akatokatyamadzwa zvachose, nekuti hapana chimwe chazvo CHAKAITIKA. Ndiri kuzvigadzira nekuti ndiri kunyatsoreva.
Iyo 'Nhamo Ini' Mutemo
Ini ndoziva izvozvi ingori kutsvaga-kutsvaga kushatirwa, asi pandakanga ndiine makore manomwe, uye gumi, uye 13, uye 19, uye 23, uye 25, ndaive nechokwadi chese kuti aive chimiro chekutambudzika. Iye akataura zvinhu zvakaita sekuti: 'Rimwe ramazuva ndichafa,' 'Ndiri kuda kumhanya uye handichazombodzoka,' 'Ndiri kuda kusvetuka kubva mugomo,' 'Usatsunga kuchema kana ndafa, wanga uchinditambudza kwazvo. ”
Haasi aya mazwi akarwadza zvakanyanya, asi matauriro ake, kufema akaneta, kurova kwake, kutadza kwake kuzvidzora (kwete kuti aiyedza), kuchema kwake.
Kwaive kunokatyamadza chaizvo kumwana kana wechidiki kuona nekuzvinzwa izvo, uye kunyangwe mumakore angu ekutanga makumi maviri, zvaizondipwanya.
Hongu, ndaifunga chaizvo kuti amai vangu vaizofa kana ndikaenda kumafaro, kana kana ndaive nemukomana, kana ndikaenda kune rimwe guta.
Ndakafambisa, asi izwi rakaramba riripo. Ini ndinonzwa izwi rake zuva rega rega, sekondi yega yega. Ndakarega kurota nekuti ndaiziva kuti aisazobvuma, uye kana akasazvibvuma, zvaizoreva kuti handifanire kuvatevera nekuti izvo zvakandiita mwanasikana akaipa. Uye ini handina kukwanisa kuzvitora.
Iyo Grey Rock Maitiro Ekubata NaNarcissist Kana Pasina Kubata Hakusi Sarudzo
Iyo Covert Narcissist: Anonyara Sei, Anopindirana Mhando Anogona Kuva Narcissists Zvakare
7 Kuporesa Kusimbisa Kwevakatambudzwa Nekushungurudzwa kweNarcissistic
5 Hook Inoshandiswa neNarcissist Kuti Uchengete Iwe Kudzoka
Maitiro Ekurapa Kwangu
Imwe nguva ini ndaive nekurwiswa kwakajairika kwepfungwa dzinomhanya uye dzichirovera kumhanya kwakanyanya. Ndinonzwa zvakanyanya, ndinovhiringidzika, zvinoita se 'manzwi' mazhinji achitaura panguva imwechete kwete manzwi chaiwo, asi ruzha rwakanyanya.
Saka ndakaenda kuAmazon ndokutaipa 'vabereki vanodzora' mukutsvaga, uye paive nebhuku raizove bhuku rangu rekutanga kupora. In Dai Iwe Wanga Uchidzora Vabereki *, Dr. Dan Neuharth anotsanangura zvinokonzeresa kuve nemubereki anonyaradza, uye maitiro ekuita navo.
Anopawo divi ravo renyaya, kuti vakatambura zvakadii zvakare, nekuti vazhinji vakava nezviitiko zvinoshungurudza vachiri vadiki. Anopa mazano nezvekuti ungave nehupenyu hwakanaka kana ukagara navo, uye kana ukafunga kuenda hapana kuonana .
Kunzwa kwekusimbiswa kwaive kwakakura, uye kufarira kwangu kwakava nenzara mushure mekuwanikwa uku kwekutanga. Ndakadzidza kuti izvo zvikamu zvangu zvakakuvadzwa uye zvakakanganisika zvichagara neni sevana vanogara mukati mangu, uye basa rangu nderekuita kuti vanzwe kudiwa kuvapa rudo rwavasina kumbogamuchira.
Uye ini ndiri kushanda pavari. Hazvisi nyore zvachose, asi kumira haisi sarudzo. Kana iwe uriwo mwanasikana (kana mwanakomana) weNM, ini ndiri kuzokupa iwe mamwe mazano zvinhu zvakandibatsira kuti ndinzwe kushomeka kune hutano hwamai vangu, uye kuti ndizvione ndiri wepakati munhu, kwete sechikara . Izvi zvinhu zvinogona kuve pachena kune rese pasirese, asi hazvisi zvevanhu vakaita sesu:
Iwe hauna mhosva. Amai vako vanogona kunge vakakupa mhosva yechinhu chimwe nechimwe chavaigona kufunga nezvacho: hutano hwavo, kugara kwavo zvakanaka, kutambura kwavo. Iwe waive mutariri wezvese zvinhu, saka iwe waigara uchigara mune mamiriro ekuchenjerera. “Chii chinotevera? Ndakatadzei panguva ino? ” Hazvina mhosva kuti iwe dai wakagara zuva rese mumba mako, iye aigara achiwana chimwe chinhu nekuti ndizvo zvavanoita, vanokuwana uine mhosva kuti vagogona kusava nemhosva.
Ihondo isingaperi. Chokwadi ndechekuti: chiripo hapana zvakanyanya kukanganisa newe. Chinhu chakaora chete maonero amai vako.
Iwe ndiwe waida kuchengetedzwa. Pamwe amai vako, sangu, vakakupa basa ramai, uye ndivo vaigara vari mwana asingagutsikane aigara achirwadziwa. Asi muchokwadi, yaive imwe nzira yakatenderedza.
Iye aifanirwa kuve iye aikuchengeta iwe ndiwe waimuda kuti akude, nekukutungamira, nekukurera.
Shingairira pane zvinokuvadza zvikamu zvako, usazvirambe. Vanhu vazhinji nevanyori vanotidzidzisa kubvisa izvo zvikamu zvedu pachedu izvo zvisingatibvumidze kuramba tichifamba. Chinhu ndechekuti, izvi zvikamu zvedu pachedu - zvikamu zveudiki hwedu - izvo zvinoda kuzivikanwa.
Teerera kwavari, unzwisise, uye vade. Iwe haufanire kuita pavari kana kutenda zvavanotaura. Rangarira, ivo vanongotaura nezve ruzivo rwavakagamuchira, asi ikozvino unoziva zvakanyatsoitika, saka unogona kuzvitarisira.
Usatombofunga kuti uri zvaakataura iwe zvaanga asingagoni kuona chimwe chinhu. Sokutaura kunoita Kelly Clarkson: 'Iwe wakangoona kurwadziwa kwako,' uye mazhinji acho anorwadziwawo. Asi izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kutera kune yakaipa mutambo wavanotamba iwo mutambo wekukuita iwe tarisiro.
* ichi chinongedzo chekubatana - kana iwe ukatenga bhuku iri, ini ndinogashira diki komisheni. Izvi hapana nenzira inoshandura kurudziro yakazvimirira yemunyori uyu muenzi.
zvinhu zvekuita kana iwe wabowa
maitiro ekuvaka kuvimba kumashure muhukama mushure mekunyepa
hunhu hwandinotarisa mumurume
zvinorevei kuva nenyaya dzekusiya
kana mukomana wako asingafone
kuve nani muhupenyu